Goorma ayaa la dhammeystirayaa dib-u-eegista Dastuurka? – Kalfadhi
Dhammeystirka Dastuurka KMG ee dalka Somaaliya, ayaa waxaa ay aheyd mid kamid ah tiirarkii ololaha ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo, balse falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa Kalfadhi u sheegay in fursadda dowladda Farmaajo ay u heysato dhammeystirka Dastuurka ay tahay boqolkiiba 80, marka loo bar-bar dhigo muddada sanadka iyo barka ah ee u haray.
Guddiyadda dib-u-eegista ee labada gole ee Baarlamaanka, ayaa bilihii lasoo dhaafay waxaa ay goboladda Dalka, ay ka wadeen kullamo wada-tashi ah oo ku saabsan Dasuurka, ka hor inta aan la gelinin wada-tashi dadweyne oo ah heerka u dambeeyay ee marxaladda Dastuurka.
Guddiyadda ayaa sheegay in 15-ka cutut ee Dastuurka la dhammeystiray.
Soomaaliya iyo saaxibadeeda caalamku oo 1dii iyo 2dii bishan Octoobar 2019 kulan ku qaatay magaalada Muqdisho,ayaa kullankaasi waxaa uu ka mid ahaa kulamadii Madasha Iskaashiga Soomaaliya iyo Caalamka. Ka soo qeybgalayaasha waxay aad uga hadleen horumarkii la sameeyay tan iyo kulankii ugu dambeeyay Madasha Iskaashiga Soomaaliya iyo Caalamka ee dhacay bishii Luulyo 2018 oo la isku raacay in si wadajir ah loo qaado tallaabooyinka mudnaanta leh ee lagu abbaarayo caqabadaha harsan.
Mid kamid ah qodobaddii laga soo saaray shirkooda ayaa waxaa lagu sheegay in Soomaaliya ay ka go’an in ay dhammeystirto dib-u-eegista dastuurka bisha June 2020, ansixinta dastuurka ka dib marka wax ka baddelis lagu sameeyo, in la dhiso Maxkamadda dastuuriga ah iyo Golaha Adeegga Garsoorka, sii wadista geeddi socodka dhab-u heshiinta Qaranka. iyo xaqiijinta ka qeybgalka dhammaan qeybaha bulshada oo ay ka mid yihiin haweenku gaarista go’aannada siyaasadeed ee dalka.